MUQDISHO - Qoraal kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegey in kulan wadashi ah la isugu yeerey Madaxda dowlad goboleedyada, kaasoo aan lagu xusin go'aankii maanta kasoo baxay magaalada Kismayo.
Warsaxafadeedkaan ayaa lagu sheegey in maalmaha 17-18 Sept,2018 kulankaan ka dhici doona magaalada Muqdisho iyadoo lagu sheegey qoraalkaan in looga wada-tashan doona howlaha muhiimka ah ee horyaala Golaha amniga Qaranka.
Qodobada lagu xusey in kulankaan lagaga hadli doona ayaa waxaa kamid ah kuwii maanta madaxda maamulada Soomaalida ku eedeeyeen iney dowlada Federaalka ka gaabisay inta ay xukunka hayeen madaxda sare ee dowlada kuwasoo ay kamid yihiin amniga gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah kooxaha Al-shabaab.
Qoaraalkaan ayaa lagu xusey in xalka Masiiriga ah ee dalka tahay mid u taalla Soomaalida iyadoo lagu akhrin karo hadalkan in dowlada Federaalka Soomaaliya ku eedeyneyso madaxda maamulada iney u gacan haatinayaan dowladu shisheeye.
Madaxda Soomaalida ayaa warmurtiyeed ay maanta kasoo saareen Kismaayo shurruud ku xirey wadashaqeyn dambe ay la yeeshaan dowlada Federaalka Soomaaliya. Halkaan ka akhri
Hogaamiye-yaasha maamulada Soomaaliya ayaa waxaa ku soo fool leh doorashooyin kuwasoo dhacaya inta u dhexeysaa dabayaaqada sanadkaan iyo bartamaha sanadka 2019.
Warsaxafadeedka Madaxtooyada Soomaaliya kasoo baxay ayaa u qoraa sidatan:
Kukankaan ayaa ku soo beegmaya xilli uu xun yahay xiriirka u dhexeeya maamulada...
Xafiiska Taliye ku-xigeenka NISA oo la jabsaday [Halkuu ka yimid khilaafka Hay'adda?]
Soomaliya 20.07.2018. 01:32